Minigba obere valvụ- PUMA
Njikọ dị elu ejiri rụọ ọrụ ugbo iji hụ na mmiri na-esi na Pee isi ọkpọkọ gaa na driplines dị mkpa. Achọrọ roba akara maka njikọ na ọkpọkọ isi. Njikọ ya na dripline na-eme site na akụ. N'ihi njikọ valvụ ahụ, enwere ike ịgbanyụ mmiri ma ọ bụ gbanwee ya na ego achọrọ.
Agba: Nwa / Blue
Nha: 16mm / 20mm
16mm / 20mm ntapu teepu valvụ
Mgbe ị na-ehichapụ teepu valvụ na-ejikọ ihe ejiri na sistemụ mmiri mgbe ị na-etinye teepu nwere obere mgbidi.
A na-eji ha iji jikọọ teepu na-asọpu mmiri na pipụ PE nke na-enye ubi ahụ mmiri.
Njikọ na dayameta nke 16 mm dị mma maka ijikọ teepu drip na akara ogologo ruo 200 m, na valvụ ahụ na-enye ohere mmechi mmechi nke ngalaba na-enweghị ịgbanyụ mmiri niile.
Ihe ha ji eme ya na-eguzogide oke okpomọkụ na radieshon UV.
Njikọ ndị a dị oke mkpa maka ịwu usoro sistemụ na iji teepu mmiri.
A na-ahazi ọdịdị ha ma dakọtara na teepu ndị ọzọ nwere obere ọpụpụ na ahịa.
Nnukwu nhọrọ nke akwa akwa ndị a na-enye ohere ka ha jiri nhazi njikọ dị iche iche (nwere ọkpọkọ, yana eri, teepu ọzọ).
Nke gara aga: Brass nozzles mmetụta sprinkler
Osote: Ngwunye mmiri kwesịrị ekwesị - Ogige Ogige 17MM (POM)
Anti-ehi ehi Mini valvụ
Minigba obere valvụ
Obere Valve Barbed
Mini valvụ Barbed N'ihi Mezie
Mini valvụ N'ihi Layflat
Mini valvụ N'ihi Pee
Obere Valve Offtake Na Gasket
Riggba mmiri obere valvụ- Ọdụm
Ngwunye mmiri kwesịrị ekwesị - Ogige Ogige 17MM (POM)
Njikọ maka microtube